भित्री बस्त्रको प्रयोग गर्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा – Yug Aahwan Daily
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रदेश प्रमुख कलौनीको सुझाव : स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुहोस
काँग्रेस द्धारा सरकारसँग अक्सिजन र खोपको पर्याप्त व्यवस्था गर्न माग
करिश्मा भन्छिन्–‘पारिश्रमिकमा महिला कलाकारमाथि विभेद छ’
सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को २ अनुसारको शुरू गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग
ओलीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ
कोरोना महामारीसँगै मजदुरी गर्नेहरुलाई छाक टार्ने पिरलो
नेताको बीऊ मासिएकै हो त ?
भित्री बस्त्रको प्रयोग गर्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा
युग संवाददाता । २५ माघ २०७६, शनिबार १३:०० मा प्रकाशित
398 पटक हेरिएको
बाहिरी बस्त्र खरिद गर्दा त्यसको रुपरंग, बनौट सबै कुरामा ध्यान दिन्छौं, ताकि आफुलाई सुहाउँदो होस् । तर, भित्री बस्त्र नि ? अब तपाईं एक कदम पछि हट्नुहुनेछ । किनभने भित्री बस्त्र खरिद गर्दा त्यसको बारेमा खासै ख्याल राख्नुहुन्न ।
किनभने तपाईं–हामीलाई लाग्छ, भित्री बस्त्र भनेको छोपिने चिज हो । देखिने भए पो राम्रो हुनुपर्छ । तर, यस्तो कुरा सही होइन । भित्री बस्त्र छालामैत्री वा सहज हुनुपर्छ । अन्याथा यसले शरीरमा असर गर्न सक्छ । हुन त हामीलाई यस्ता कुरा वाहियत लाग्छ वा सामान्य लाग्छ । तर, प्रजनन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले भित्री बस्त्रको बारेमा संवेदनसिल हुनैपर्छ ।
पेन्टी कहिले बदल्नुपर्छ ? अक्सर यसबारे हामी उति ख्याल गर्दैैनौं । अरु लुगा, जुत्ता आदि त समय समयमा वा फेसन अनुरुप बदल्छौं । तर, पेन्टी ? पेन्टी निश्चित अवधीमा बदल्नुपर्छ । धेरै समय एउटै पेन्टी प्रयोग गर्दा त्यसले प्रजनन अंगमा समस्या ल्याउन सक्छ ।
पेन्टीमा यी कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ?
राती सुत्दा पेन्टी लगाउने कि नलगाउने ? राती सुत्दा पेन्टी लगाउने कि नलगाउने ? संभव भएसम्म पेन्टी नलगाई सुत्नु राम्रो हो । पेन्टी नलगाइ सुन्दा महिलाहरुले छुट्टै आनन्द पाउँछन् र शरीरको त्यो भागलाई पनि राहत मिल्छ ।